MANOJ BOGATI: आँखामाथि कविता(ऋङ्‌खला)
कवि विचन्द्र भन्छन्‌-कविता लेख्न ठूला-ठूला ग्रन्थहरूको आवश्यकता छैन। कविता आफै आउँछ। आएर, लेख्न लगाउँछ कविलाई।
अरू पनि धेरै भन्छन्‌ उनी। अब कविताको स्वादमा के के खोज्न थालिएको छ। कसैले पनि तर त्यो के के -लाई यस्तो भन्न सकेका भने छैनन्‌। दलगाउँबाट जब म कालेबुङ आएँ, मैले मनमा सोंचेको कालेबुङ पाइनँ कालेबुङमा। आफ्नो सिर्जनात्मकतालाई अघि बढ़ाउन केही मिल्दा साथीहरूसित केही गरौं भन्ने प्रयासहरू कालेबुङ आएर गरियो। कालेबुङमा जीविकोपार्जन अनि साहित्योपार्जन दुवैको भुइँ खन्नुपर्ने स्थिति मेरो थियो। उमेश उपमा अनि सूरज रोसूरीसित केही नौलो गरौं भन्ने मेरो ढिपीको कारण विचलन जन्मियो। विचलनमा विचार भन्दापनि मेरो सोंचसित विचलनका सम्पादकहरूको विचारले त्यो मैत्रिकता पक्रिन सकेन। विचलनले कविता लेख्न मलाई आडम्वरी बनाइरहेको धेर बोधको कारण म विचलनमा रहिनँ। विचार स्वतन्त्र छ। अनि सबैले सबैको विचार मान्नु पर्छ भन्ने पनि छैन। अहिले त्यही विचलन खेप्नेहरूबाट हामीले सूधीर, जय र उज्ज्वल जस्ता राम्रा कविहरू मौलिएका पाएका छौं।
कविता विचार मात्र पनि होइन। बुद्धि र मन दुवैको सहकार्यमा कविताकर्म हुन्छ। कविता कुनै पनि फ्रेमभित्र बस्दैन। फ्रेमभित्र हालेर कविताको उमेर तोक्ने गैरजिम्मेवार कवि हुन सक्तैन। हामीसित कविता लेखेरै उमेर पाक्नेहरू पनि छन्‌। उमेर नै नपाकी पाकेका कविता लेख्नेहरू पनि छन्‌। तर कविता नै लेख्नेहरू भने थोरै छन्‌। म कविता लेखौं भन्छु, आफू पनि कविता लेख्ने यसरी कोशिष गर्दै।
मलाई आँखा साह्रै मन पर्छ। आँखाबाट म ज्यादै प्रभावित छु। जब जुन कुरोबाट म प्रभावित हुन्छु, कविता आउँछ। आँखा नहुनु मेरो कविता हुने थिएन। आँखामा डुब्ने कोशिषहरू हुन्‌ यी कविताहरू। आँखा र कविता एउटै जस्तो लाग्ने यो अतिवादी बोधदेखि कायल भएँ म। कवि मोहन ठकुरी, मनप्रसाद सुब्बा,श्रीमति सानुमति राई,केवलचन्द्र लामा,राजा पुनियानी,रेमिका थापाहरू यी कविताहरू लेख्न मेरा प्रेरक बनेका हुन्‌ अनि हुन्‌ उपासक पुस्तक पसलका दाज्यू सूर्य उपासक। कृषक कल्याण सङ्गठनमा आए पछि मलाई धेर सिर्जनात्म्क बनाएको छ। प्रिय दाज्यू विष्णु छेत्रीको आँखाबाट पनि मैले यी कविताहरू टिपेको छु।
मेरी धर्मपत्नी भक्ति अनि छोरो आरोहण, जसको आँखाले मलाई सधैँ कविता लेख्ने आँखा देखाउँछ। उनीहरूले देखाएको आँखाले देखेका हुन्‌ यी कविताहरू।
तिम्रो आँखा फुलेको छ
मेरो गुलाबको बोटमा।
छुन सक्तिन म।
कति तिखा छन्‌ तिम्रा परेलीहरू
तिम्रो आँखाको पहरामा।
आँखा छल्न सक्तिन म।
तिम्रो आँखामा लतपतिएको त्यो यौनिक रङले तानेर
मेरो लुते मर्यादालाई।
आफ्नो सबै भन्दा सम्वेदनशील अङ्गलाई
पातलो स्वाभिमानले छोपेर
तिम्रो आँखाको आगो पटक्कै निभ्दैन।
कता-कताबाट पग्लिन्छ हिउँपुरुष
कुनै पोखरीमा जम्दैन।
पग्लिबस्नुको यो मीठो स्वाद
जीवनको मीठो कविता
एक्लै भोग्छु म।
अर्धनग्न नायिकाको यो तस्वीरको गहिरोमा जति डुब्छ
उति बन्द हुन्छ
आँखाको अँध्यारो-उज्यालो हुँदैन
आँखा नहुँदा पनि देख्न सकिन्छ।
फूल मन नपर्ने मान्छेले
आँखामा जति नै गाजल लगाएपनि
आँखा तबसम्म आँखा हुँदैन
जबसम्म उसले देख्न सक्तैन
उसले देख्न नसक्नु
आँखाको दोष होइन।
उज्यालो पनि हुँदैन
अँध्यारो पनि हुँदैन।
आँखाको फूलमा बस्न सक्तैन सपना।
बलियो भुईं चाहिन्छ
सपना देख्न सक्नेले मात्र
विपनाको अनुहार जस्तो हुँदैन।
अन्धाहरू कस्ता सपना देख्छन्‌ हँ
आँखाले सपना देख्न
अँध्यारोको निम्ति हो।
जीवनको यो अर्थ
टल्किएको छ अहिले।
म अन्धोको कल्पना देख्न सक्तिनँ
अन्धोको अनुहार नै हुँदैन।
मेरो छायॉंको दृश्य कस्तो हुन्छ
दृष्टिहीनले के भन्लान्‌?
म दृष्टिहीनको कल्पना गर्न सक्तिनँ।
आँखा भएर नदेख्नु
आफूलाई नदेख्नेहरूले गरेको संसारको व्याख्याय
आँखामा मात्र लिङ्गठिङ्ग बोकेर हिँड्छ जब
अन्धा जस्तो दुख्नुहरूको लामो दिन टॉंगिन्छ
समयको कालो ब्ल्याकबोर्डमा।
घाउका आँखा कस्ता हुन्छन्‌ र
लिङ्गजस्तो ठिङ्ग उभिने आँखामा
को सुटुक्क पसेकाछन्‌ कुन्नि
छट्‌पटाउन थालेको छ।
यही आँखा हो
पाप र धर्म।
मैले नदेखेर कुल्चिएँ
कुल्चिएको थाहा पाएपछि मैले देखें
पूण्यको खोल ओढ़ेर सँगै बसेको
बाबाको आँखा भन्दा गहिरो छैन
बाबाको आँखा बन्द भएको दिन
मेरो आँखाबाट बिहान उघ्रनेछ।
मेरो आँखा पनि बाबाको आँखा हुनेछ।
आँखाहरू एकै हुन्नन्‌।
आँखा एकै भएदेखि
म मरिरहेको देख्ने थिइन्‌।
ऊ मरिरहेको म देखिरहेछु।
आँखाहरू एकै हुनु त हो।
उड़ेर गएका दुइ अक्षरको निम्ति
पिञ्जड़ा बनाउन सकिनन्‌ उनले।
एउटै भूईं टेकेर
हामीले हामी भेट्‌न सकेनौं।
मसितै छन्‌ ती दुइ अक्षर
-बाजेको वियोगी प्रेम पढ़िरहेछु
कति कोमल हुन्छन्‌ आँखाहरू।
जब पग्लिनुले सीमा नाघ्छ
आँखाको दृष्टि पखाल्छ।
त्यतिबेला नै भत्किन्छ संसार।
सपना देख्छ कि देख्दैन हँ युङ?
...कविता पठन समाप्तिएको छैन...
आफैलाई नदेख्ने आँखा यो
अरूले कसरी फुटाउन सक्छन्‌ त मेरो आँखा।
उनीहरू मेरो आँखासित आह्रिस गर्छन्‌
उनीहरूलाई नहेर्नु भन्छन्‌ उनीहरू
उनीहरूलाई नदेख्नु भन्छन्‌ उनीहरू
मेरो आँखा छल्नेहरू
आफ्नै आँखा छल्नेहरू
म मेरो आँखा छोप्न सक्तिनँ।
दिन अँध्यारो हुँदैन
रात उज्यालो हुँदैन।
तर आँखा छोप्दिनँ।
मरेपछि लाशको आँखा छोप्नेहरूले बुझुन्‌
लाशले आँखा देख्दैन।
...कविता जारी छ...
आँखाबाट सिक्छु म
आँखा फुटे जस्तै हुन्छ
एउटा आँखा फुटे पनि अर्को आँखाले देखिन्छ संसार।
एउटा आँखा फुट्‌नुको वेदना तर
प्रेम नै त हो।
आँखाबाट सिकेको छु मैले
खुला छ आँखा
चश्मा भिर्छ पहाड़
र बेच्छ जीउ।
हरियो साड़ी लाएकी द्रौपदी बाहेक
कस्तो अचुक निशाना छ अर्जुनको ।
गाउँमा पञ्चायत बसेको छ।
बारूदको हावा चल्दैछ।
हिंसा हो कि गिद्ध हो
कविताप्रेमको चरम असन्तुष्टिमा छु।
मेरो आँखाबाट खस्दैछ
बिहानै मलाई हेरेर हॉंस्यो
सगरमाथाको त्यो अतिथि सत्कार बोकेर
फर्केको छु म दार्जीलिङ।
कहॉं देखिन्छ गाउँको घाउ?
गाउँको घाउ देख्न
कञ्चनजङ्घाको फेदमा झुण्डिएको
आमाको फाटेको चोलीबाट
छर्लङ्ग देखिने इतिहास।
त्यसपछि गर्नु किनाराको कुरा।
पहेंलो घाम छ
छेउबाट नै गइरहेछ
अगमसिंह गिरीका कविताहरू
म फ्यॉंक्रेको पातले छॉंउदैछु
मेरो आँखा भिजेन।
जनतालाई बॉंच्न सिकाउन
बॉंदरको आँखा देखाउँथे।
मान्छेको आँखालाई हेर्न सिकाउने
बॉंदरको ईश्वर आँखा
कसरी चिने बापूजीले?
नहेर्नुहरूले खेदिबस्छ आँखालाई।
नदेख्नुहरूले छेलिबस्छ आँखालाई।
कति भाग्न सक्छ आँखा बापूको लौरो टेकेर?
बापूजी छैनन्‌। अहिले
बॉंदरको आँखाबाट पनि उड़ेर गयो
वाणीको चहकिलो रङ।
ती अक्षरहरू जब भुँइमा खस्छन्‌
मीठो कविता बज्छ
घर स्वर्ग बन्छ।
त्यो संसारको सबैभन्दा मीठो सङ्गीत
जसले थामेको छ जीवनको गह्रौं गरिमालाई।
जब आँखामा जम्छ
मेरा दुःखहरूले मेरो साथ छोड़्‌छन्‌
मेरा सुखहरूले मेरो हात छोड्छन्‌।
ती अक्षरहरूले मलाई जीवन लेख्न अह्राउँछ।
म जीवन लेख्ने कोशिष गर्दा-गर्दै बित्छु।
मलाई थाहा छैन म बिते पछि घरमा
त्यो सङ्गीत बज्छ कि बज्दैन।
कसरी ढड्छ स्वर्ग।
आँखा भिज्दा नै
जीवन भरिलो हुन्छ
दाउरीको खुलेको आँखामा छ
सपनाहरू ढड़ेको कालो दाग।
त्यसको कोमल ओंठ
खड़ेरीमा फुल्ने त्यसको सपनालाई छुन सक्तैन
कुनै आतङ्‌कवादी मौसमले।
त्यसको तल्लो पेटमा चल्मलाउँछ
लुते छालाबाट आइरहेको त्यो गन्धले
कति मातेको छ समय
बगलीमा छुरी लुकाएर
दाउरीको जीवन च्यात्ने